Fractional RF Micro agịga igwe NBW-FR200 ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya-China Fractional RF Micro agịga igwe NBW-FR200
Nnukwu Mwepụ Igwe Ududo Ududo Ududo
Igwe ikuku redio Microneedle RF Microneedle RF na Fractional RF beauty Machine maka mbuli ihu
RF Fractional bụ ngwaọrụ mara mma na -ejikọ nsonaazụ zuru oke nke Radio Wave na. Micro-agịga Fractional Meso
ọgwụgwọ. Ngwakọta nke ụzọ abụọ ahụ n'otu ọgwụgwọ na -akwalite mbelata scars. wrinkles na gbatịa
akara mwepụ. na -ekwe nkwa ndozi ngwa ngwa. Ejiri ngwaọrụ abụọ nwere ngwaọrụ
na -enyere aka iji ụzọ abụọ dị iche iche nke ebili mmiri redio na -arụ ọrụ.
Ọganihu dị elu nke ọkachamara ọkachamara nlekọta anụ ahụ Pixel-2 fractional rf microneedle machine
2021 akpụkpọ anụ mesotherapy kachasị ọhụrụ na ihu na -ebuli thermagic fractional RF microneedle ematrix sublative machine.
Mwepụ Mweghachi Akpụkpọ ahụ Ihu Ihu Igwe Igwe Igwe Microneedling RF nke nwere aka abụọ dị
Ọkachamara ihe na -ewepu ihe pere mpe rf micro agịga igwe microneedle
Nlekọta anụ ahụ RF Microneedling Machine Maka Mbelata Pore Enweghị Ọkụ Ọ nweghị Nsogbu
Frameal Salon Fractional RF Microneedling Machine na -eji ndụmọdụ agịga agịga agịga
80W Power Fractional Microneedling Rf Machine, 5MHZ RF Igwe Igwe Igwe
Salon azụmahịa na-eji RF Microneedling Machine 25 /49 /81 Ntụtụ 1-10 Leval ọgwụgwọ
Beijing Nubway Mma gbatia akara mwepụ 5MHZ RF akpụkpọ ahụ na -agbatị ihu na -ebuli ihu irighiri ihe redio ugboro ugboro microneedle igwe
RF Fractional bụ ngwaọrụ mara mma na -ejikọ nsonaazụ zuru oke nke Radio Wave na. Micro-agịga Fractional Meso ọgwụ. Ngwakọta nke ụzọ abụọ ahụ n'otu ọgwụgwọ na -akwalite mbelata scars. wrinkles na gbatia akara mwepụ. na -ekwe nkwa ndozi ngwa ngwa. Ejiri ngwaọrụ abụọ nwere ngwaọrụ nke na -enyere aka iji ụzọ abụọ dị iche iche nke ebili mmiri redio na -arụ ọrụ.
Fractional RF Machine China Professional Micro Needling Equipment, Rf Skin Care Machine Vetikal
fractional rf microneedling igwe Nubway Akpụkpọ ahụ na -eme ka ihu na -ebuli anya
RF Fractional bụ ngwaọrụ mara mma na -ejikọ nsonaazụ zuru oke nke Radio Wave na. Micro-agịga Fractional Meso ọgwụ. Ngwakọta nke ụzọ abụọ ahụ n'otu ọgwụgwọ na -akwalite mbelata scars. wrinkles na gbatia akara mwepụ. na -ekwe nkwa ndozi ngwa ngwa. Ejiri ngwaọrụ abụọ nwere ike ịchacha ngwaọrụ ahụ site na iji ụzọ abụọ dị iche iche nke ebili mmiri redio na -arụ ọrụ.
Ọkachamara ihu na -ebuli rediofrecuencia ọnụahịa ahụike ihu na -ebuli irighiri ihe nta rf mirconeedle Skin Tightening Machine
Ngwaọrụ mkpuchi akpụkpọ anụ RF zuru oke, akụrụngwa na -ewepụ ihe na -adịghị ahụ mgbu
vetikal gbatịa akara mwepụ igwe ewu ewu ọnụ ala ngwa ngwa nnyefe pere mpe rf redio ugboro Ngwa aesthetic
Beijing Nubway S na T Co. Ltd guzobere kemgbe 2002 ma dị na Shunyi District, Beijing, China. Anyị jikọtara R&D,
ọrụ mmepụta, ire ahịa na ọzụzụ maka ụlọ ọrụ na -emepụta ihe nke ọma. N'ime ọtụtụ afọ, Nubway nwere
chikọtara otu ndị ọrụ nka a zụrụ nke ọma bụ ndị ọkachamara na ngalaba dị iche iche, dị ka teknụzụ optoelectronic, ọgwụ
ụlọọgwụ mara mma, imepụta igwe, imepụta ọdịdị ngwaahịa, onye ndụmọdụ ịma mma ahụike yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ọdịdị.
Ugbu a anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200 zụrụ nke ọma, ndị raara onwe ha nye.
Omenala ụlọ ọrụ nke Nubway: Ogo bụ isiokwu ebighi ebi nke ụlọ ọrụ, ọrụ bụ echiche anaghị agbanwe agbanwe nke ụlọ ọrụ.